Labo ka tirsan shaqaalaha Qaramada Midoobay oo lagu dilay Gaalkacyo (Faahfaahin) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gaalkacyo – Mareeg.com: Labo nin oo u shaqeynayay Qaramada Midoobay ayaa maanta lagu toogtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Mid ka mid ah labadan shaqaale wuxuu ku dhintay gudaha garoonka, halka kana kalana dhintay xilli loola sii cararayey Isbitaalka.
Wararka ka imaanaya Gaalkacyo ayaa sheegaya in dilka labadani uu geystay askari tirsan ciidamada maamulka Puntland, wuxuuna dilku ka dhacay qolka nasashada ee garoonka diyaaraddaha magaalkada.
Labada shaqaalaha ah ee la dilay ayaa ka tirsanaa shaqaalaha Hay’adda UNODC ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha daroogada iyo ka hortaga dambiyada, taasoo Puntland ka qabata arrimo ay ka mid yihiin ka hortaga burcad badeedda.
Wararku waxa ay sheegayaan in la qabtay askarigii ka dambeeyay dilka saraakiishan. Saraakiishan ayaa wararka ay sheegayaan in ay u shaqeynayeen hay’ad wax ka qabata arrimaha burcad badeeda.
Meydka labada nin ee ka tirsan shaqaalaha UN-ka ayaa la dhigay isbitaal ku yaalla magaalada Gaalkacyo, halkaasoo lagu sii heynayo ilaa dalka laga dhoofiyo.
Dilka labadan nin ayaa kusoo beegmaysa xilli maanta reer Gaalkacyo ay si weyn isu diyaariyeen in ay soo dhoweeyaan madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Agaasimaha hay’adda la dagaalanka Burcad-badeeda Puntland, Cabdirisaaq Maxamed Dirir ayaa canbaareeyey dilka laba xubnood oo ka tirsan xafiiska sare ee hay’adda UNODC laanteeda sare ee Vienna.
Cabdirisaaq Maxamed dirir ayaa sheegay in falkaan oo kale uu yahay mid fool xun oo sharaf dhac wayn keeni kara, in kastoo uu ka gaabsaday inuu ka hadlo sababta ka dambaysay dilka saraakiisha.
Labada sarkaal ee ka tirsanaa UNODC ee la dilay ayaa u kala dhashay dalalka France iyo Britain, waxayna safar ku mari lahaayeen Galkacayo ilaa Boosaaso, si ay u hubiyaan shaqooyin hay’adoodu qayb ka ahayd.
Duceysane ayaa sheegay in labadan shaqaale u yimaadeen Puntland sidii loo hubin lahaa natiijada go’aamo kazoo baxay shir sanadkii dhacay, kaasoo lagu xakameynayey kala xiwilidda lacaga burcad badeedda.
“Waxey ragaas Puntland u yimaadeen sidii loo hubin lahaa wixii ka soo baxay shir sanadkii hore dhacay oo laga soo saaray qodobo la xiriira habka xawilaada lacagta gudaha iyo dibeda iyadoo la hubinayo lacagaha burcad badeeda” ayuu yyiri Duceysane oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta Puntland.
Wuxuu sheegay Duceysane in in shaqaalahan socod ku mari lahaayeen magaalooyinka Gaalkacayo, Garoowe iyo Boosaaso, islamarkaana kulamo kula qaadan lahaayeen wasaaradda maaliyada iyo madaxda xawaaladaha iyo xubno kale.
Hay’adda UNODC ayaa sahqooyin badan ka qabata deegaanada maamulka Puntland, iyadoo waxyaabaha ay qabato ay ka mid ah tahay la dagaallanka kooxaha burcad badeedda ah ee ka howlgalka dhulkaas.